कस्ले गर्यो जेनिथ स्कुलको बसमा आगजनी ?(भिडियोसहित) - हेटौंडा टुडे
कस्ले गर्यो जेनिथ स्कुलको बसमा आगजनी ?(भिडियोसहित)
१९ माघ २०७६, आईतवार १५:४०
माघ १८ , हेटौँडा /मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नंबर ५ मा रहेको जेनिथ इन्टरनेशनल स्कूलको दुईबटा बसमा आगजनि भएको छ ।बसमा शनिबार बेलुका अज्ञात समुहले आगो लगाइदिएका छन् । स्कुलको कम्पाण्डभित्र रहेको बसमा अज्ञात समुहले आगजनी गरेपछि दुबै बसमा क्षति पुगेको छ । बेलुका करिब ९ बजे ना ७ ख ८७२८ र ना १ क ३२१८ नम्बरको बसमा आगजनी भएको हो । स्थानीयले सो आगो लागेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
मध्यरातमा दनदनी बल्यो हेटौँडाको जेनिथ स्कुलको बस(हेनुहोस भिडियो)
मध्यरातमा दनदनी बल्यो हेटौँडाको जेनिथ स्कुलको बस, कस्ले गर्यो आगजनी ?
Gepostet von Hetauda Today am Samstag, 1. Februar 2020
बसमा आगो लगाउने २ जना को हो ?
कलेजको बसमा आगो लगाउँदै गरेको अवस्थाको भिडियो बाहिरिएको छ । कलेजमा रहेको सीसी क्यामेराले उक्त बसमा आगजानी गरेको दृश्य कैद गरेको छ ।
भिडियोमा २ जना व्यक्तिले बसमा आगो लगाएको देख्न सकिन्छ । बसमा आगो सल्किएपछि उनीहरु त्याहाँबाट भागेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । बसमा अगो लगाउनेहरु को हुन भन्ने बारे भने खुलिसकेको छैन । प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसरी भागे २ जना व्यक्ति हेर्नुहोस् भिडियो
Gepostet von Hetauda Today am Sonntag, 2. Februar 2020